Paositra Malagasy : “Fanoitry ny fampandrosoana” -
AccueilRaharaham-pirenenaPaositra Malagasy : “Fanoitry ny fampandrosoana”
Paositra Malagasy : “Fanoitry ny fampandrosoana”
27/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Raha ny fandefasana taratasy no niandohan’ny paositra malagasy dia mivoatra hatrany manaraka ny toetr’andro izy ankehitriny. Mivoatra manaraka ny teknolojia mba ahafahana manome fahafaham-po ny mpanjifa ao aminy. Manoloana izay fandrosoan’ny paositra izay, dia nanambara ny Filoha Rajaonarimampianina Hery nandritra ny fanokafany ny fivoriana tsy ara-potoana faha-5 niarahan’ireo minisitra misahana ny paositra mpikambana ao anatin’ny UPAP ( Union panafricaine des postes), teny amin’ny trano fandraisana fivoriana iraisam-pirenena na CCI eny Ivato, fa sehatra azo hitondrana fampandrosoana tsara raha ny paositra Malagasy, ary manana andraikitra lehibe eo amin’ny toe-karen’i Madagasikara izy, indrindra amin’izao ny paositra lasa mpandraharaha ara-bola izao. “Efa lasa sehatra azo hanaovana fandraharahana ara-bola ny maositra malagasy. Noho izany, mitana andraikitra vaovao amin’ny toe-karena eo anilan’ireo banky sy ireo sampandraharaha mikirakira vola ireo ny Paositra. Lasa manana anjara toerana lehibe eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana ny firenena ihany koa izy satria efa mahasehaka ireo toerana tena lavitra eto amintsika ny Paositra mba hialana amin’ny fanilikilihana ara-tsosoialy fa ihany koa, hiantohana ny fitoviana eo amin’ny rehetra. Araka izany, ny Paositra mijanona ho fanoitra lehibe amin’ny fampandrosoana maharitra sy ho an’ny rehetra », hoy ny Filoha.
Nomarihin’ny Filoha ihany koa fa fampandrosoana mipaka any amin’ny vahoaka no entin’ny Paositra manoloana ny fivoarana entina amin’ny alalan’ny haitao ara-kajy mirindra. Izay mivoatra miaraka amin’ny fiheverena ara-politika, ara-toekarena ary teknolojia. Ny haitao ara-kajy mirindra izay ao anatin’ny politikan’ny fitondram-panjakana, ny vinan’ny Fisandratana 2030 koa mba ahafahan’ny mponina rehetra misitraka ny teknolojia vaovao. Tanjona mantsy ny hiantohana ankalalahana ny fitaovana fampandrosoana, indrindra ny haitao ara-kajy mirindra any amin’ny faritra rehetra eto amin’ny Nosy ho amin’ny fanatsarana ny fampandrosoana ara-toekaren’i Madagasikara. « Nisy ny fivoaran’ ny tontolon’ny Paositra amin’izao fotoana izao, ary izay fivoarana izay no tokony horaisin’ny rehetra, sy hanavaozana ihany koa ny rafitra ao amin’ny paositra aty Afrika sy manerana izao tontolo izao. Ny paositra dia sehatra hitondrana fampandrosoana aty amin’ny firenena. Fampandrosoana maharitra sy tena mipaka any amin’ny vahoaka. Amin’izao fotoana izao moa dia efa misy ny fampandrosoana eo amin’ny lafiny ara-bola izay miseho amin’ny alalan’ny fandefasana vola amin’ny finday sy ny fanaovana varotra amin’ny alalan’ny finday. Izany rehetra izany no hodinihina anatin’ny fivoriana mba hilazana fa tena efa mivoatra, mivoatra be ary mivoatra haingana dia haingana ny tontolon’ny Paositra ao anatin’ny haitao ara-kajy mirindra, ary isika Malagasy sy eto Madagasikara izay efa tena tafiditra ao anatin’izany », hoy hatrany ny Filoha Rajaonarimampianina Hery.
Nandritra ny fandaharana fotoam-bita izay fanaon’ ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina isaka ny zoma hariva no nanambarany fa tsy misy ny tonga lafatra eto an-tany, saingy kosa na izany aza dia tsy hisy afaka hiteny ...Tohiny
Diso fanantenana Rajoelina : Nametra-pialàna ny filoha
Praiminisitra Ntsay Christian : Mamita ny irak’i Andry Rajoelina
Kortezin’ny PM : Nodoran’ny olona teny Ivandry